मार्क्सवाद : प्रयोग गर र फ्याँक ! – eratokhabar
‘एक्काईसौँ शताब्दीमा मार्क्स’
ई-रातो खबर २०७८, २४ भदौ बिहीबार ०९:०४ September 9, 2021 1511 Views
१— मार्क्सवाद नभनेर किन माक्र्सीय पद्धति भन्नुभयो ?
२— प्रविधिको विकासले के अतिरिक्त मूल्यको औचित्य सकिएको हो ?
३— शोषण, दमन, उत्पीडनको अन्त्यबिनाको मानवता कस्तो हुन्छ ? सेवाका क्षेत्रलाई वस्तु बनाइएको छैन र ?
४— द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कसको दर्शन हो ?
५— महिला, दलितलगायत उत्पीडित श्रमजीवी वर्गको अधिकार कसरी सम्भव भयो ?
पूर्वमार्क्सवादी कित्तामा लामबद्ध हुन पुगेका बाबुरामको राजनीतिक पाइला तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक जनवादी विचार बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट चलेको थियो । चालीसको दशकको मध्यदेखि उनी मार्क्सवादबाट प्रभावित भएका थिए । भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा भट्टराईको विद्यावारिधिको विषय The Nature of Underdevelopment and Regional Structure of Nepal : A Marxist Analysis2 बनाएपछि आफूलाई मार्क्सवादी चिन्तक र प्रयोगकर्ताका रूपमा नेपालमा चिनाएका थिए । आफूलाई मार्क्सवादी घोषणा गरेको ३६ वर्षमा बाबुराम यही विचार धारण गरेका कारण साम्यवादी राजनीतिको शिखरमा पुगे, सत्ता सञ्चालक बन्न पुगे, कार्यकारी प्रमुख बने । उनले आफूलाई नेपालमा संविधानसभाको अपरिहार्यताको व्याख्याता भएको दाबी गर्ने गर्थे । जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिला मार्क्सवादलाई आधार बनाएर यहाँको अर्थतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली, समाज विकासको खोजी गरेर जनयुद्धमा जानुपर्ने निष्कर्ष आफूले निकालेको पनि उनको दाबी रहँदै आएको थियो । जब देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो, एक किसिमको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लेखियो अनि बाबुरामले तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) लाई रातो स्टिकर टाँसेको घर भन्दै छाडेको घोषणा गरेर हिँडेका थिए । त्योभन्दा ठीक एक वर्षअगाडि बाबुरामले नेपालमा नयाँ शक्तिको आवश्यकताको बहस सुरु गरेका थिए । त्यसको निचोड थियो– नवउदारवाद र समाजवादको समायोजन । अहिले आएर उनी मार्क्सवादकै विरुद्धमा उत्रिएका छन् । त्यसैले उनले समूह र अनुक्रममा मार्क्सवादका विरुद्ध प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्ने दुस्साहस गरेका छन् । उनका यस्ता विनिर्माणात्मक भ्रमहरूलाई तथ्यहरूका आधारमा खारेज गर्न जरुरी भएको छ । त्यसैले सङ्गतिपूर्ण अनुक्रमात्मक शृङ्खलामा उनले पेस गरेका खण्डनहरूको पनि खण्डन गरिनेछ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) अर्घाखाँचीद्वारा पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसमा वृक्षरोपण
राष्ट्रघाती एमसीसीविरुद्ध सिङ्गो देश आन्दोलित